महामारीमा धनीले गरिबलाई साथ दिने कि ?
- सम्पदा काेइराला | शनिबार, वैशाख ४, २०७८
अहिले आएको कोरोनाले त हामीजस्ता साना मान्छेलाई धेरै सताउँछ रे । त्यसैले भाइ र मलाई स्कुल पठाउन बाबामामु डराइरहनुभएको छ ।
पहिला स्कुलमा कोही साथीलाई बिरामी देख्दा सबैले माया गर्थे, सहयोग गर्थे । तर, हिजोआज त कोही बिरामीजस्तो लाग्यो भने भाग्छन् । म पनि भाग्छु । सबैलाई आफ्नै चिन्ता हुने रै'छ । यो कोरोनाले साथीहरूको दुःखमा साथ दिन पनि रोक्यो । हाम्रो बाबाजस्तै धेरै व्यापारीलाई घाटा चखायो ।
काम गर्नेहरूलाई पनि काम गर्नबाट रोक्यो । गरिब मान्छेलाई झनै गरिब बनायो । केटाकेटीदेखि हजुरबुवा, हजुरामासम्मलाई सतायो । यो देखिने खालको हुन्थ्यो भने हामी मान्छेले यसलाई धपाउने खालको हतियार बनाइसक्थ्यौँ होला । तर, यो धेरै बाठो रहेछ, देखिँदा मान्छेले धपाउँछन् भनेर नदेखिएर मान्छेसँग लडाइँ गरिरहेको छ । तर, हामीलाई पढाउने सरले भन्नुभएको, ‘हामी सबै मिल्यौँ, सावधानी अपनायौँ भने यसलाई जित्न सकिन्छ ।’
सरको कुरा पनि ठीकै हो । तर, हामी कसरी मिल्ने ? धनी र गरिब मिल्न सकिन्छ ? धनी र गरिबले अपनाउने सावधानी उस्तैउस्तै हुन सक्छ ? धनीले कोरोना रोक्न जति शक्ति लगाउन सक्छ, गरिबले पनि त्यति नै सक्छ र ?
हुन त कोरोनाले धनी, गरिब, बच्चा, बूढो कोही भनेको छैन । तर, धनीले सबै खालका उपाय अपनाउन सक्छन्, लकडाउन खेप्न सक्छन् । गरिबले सक्दैनन् । कोरोनाले आपतसँग हामीलाई भावनाको धनी हुनु भन्ने सन्देश पनि दिएको जस्तो लाग्छ मलाई त । हामी परिआउँदा जनावरलाई मर्नबाट बचाउँछौँ । यहाँ मान्छे नै मृत्युको मुखमा पुगेका छन्, यस्तो बेला धनीले गरिबलाई साथ दिने कि ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ४, २०७८, १२:१६:००